‘क्याबिक क्रु, रेडी फर ल्याण्डिङ्’ अनि जहाज एक्कासी आकासतिर बतासियो… « Gajureal
प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०७५, आईतवार ०७:५०
‘क्याबिक क्रु, रेडी फर ल्याण्डिङ्’, पाईलटले उद्घोष गरेको २ मिनेटपछि जहाज आकासतिर बतासियो भने यात्रुको मुटुले कत्रो ढ्याङ्ग्रो ठोक्दो हो ? ५ मिनेटपछि पुन: अनाउन्स हुन्छ, ‘फाईभ जिरो मिनेट होल्डिङ् ।’ बाक्लो कुहिरो, अग्ला डाँडाकाडा, साघुरो आकासमार्ग, त्यसमापनि इन्टरनेशनल फ्लाईट, ५० मिनेटको होल्डिङ्– धन्न वीर नेपाली थुरथुर कााप्दै नडराई काठमाण्डौमा उत्रिन्छ ।
कुरो आजैको हो । कतारबाट आउने हिमालय एयरलाएन्सका हामी यात्रुहरुले भोगेको घटना । भोगाई हाम्रो मात्र हैन, काठमाण्डौ उत्रिने हजारौं यात्रुको पनि हो । एउटामात्र रनवे, सयौं जहाजको उडान र अवतरण, व्यस्त हवाई ट्राफिक– एयरपोर्ट अथोरिटीको आफ्नै समस्या होला । तर, समयमै यस्को व्यवस्थापन हुन नसके काठमाण्डौ उपत्यकाको आकास खतराको खेल केन्द्र बन्न सक्छ । कि त्यस्तो हुंदैन ?
मेरो लाटो दिमागले बुझेको कुरा, यहाँ जेपनि हुन सक्छ । धनगढी वा कााकडभिट्टाको रुटबाट नेपाल छिर्दा थाहा हुन्छ, नेपालको हवाईमार्ग कति सााघुरो छ । एउटा झ्यालबाट हेर्दा भारत देखिन्छ, अर्को झ्यालबाट चाईना देखिन्छ । अन्तारष्ट्रि्य जहाजहरु होल्ड गर्नु परेमा चाईनाको सिमाना क्रस गर्नु भएन । भारतले पनि आकासमा सिन्डिकेट खडा गरेको छ । यो खतराको खेल हैन र ?
छ । मोदीबा आउदा यो कुरो जोडदार रुपमा उठ्न जरुरी छ कि छैन ।
अस्ती बाग्लुङबाट फर्कंदा म यति एयरलाईन्सबाट पोखरा–काठमाण्डौको उडानमा थिए । २५ मिनेटमा ल्याण्ड गर्छौं भनेको जहाज ठ्याक्कै १ घण्टा १५ मिनेटमा ल्याण्ड गऱ्यो, होल्ड भएर । नपत्याए त्यो दिनको फ्लाईट स्टाटस हेरे हुन्छ । त्यहा एकजना भलाद्मी मान्छेले भन्दै थिए, कैलेकाहीं कन्ट्रोलका कर्मचारी र पाईलटको मिसअन्डरस्टाडिङ्का कारण यात्रुहरु होल्डको मारमा पर्छन् । यदि त्यस्तो हो भने तपाईंहरुको मिस अन्डरस्ट्याडिङ्का कारण हामीले खतरा मोल्नु पर्ने ? यो कति जायज छ ?
मन्त्रीहरुका सेलिब्रेटी घोषणाहरु धेरै आएकाछन् । जनताले आश गरेका युवामन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि धेरै घोषणा गरेकाछन् । मन्त्रीज्यू, जहाज थप्ने र नयाँ रुटमा पनि जहाज उडाउने काम एकछिन रोकौं । भएकालाई व्यवस्थित पारौं ।
जिल्लाका बाहिरी जिल्लाका एयरपोर्टहरुलाई रात्री उडान योग्य बनाऔं । डोमेस्टिक जहाजलाई नाईटमा उडाऔं । यात्रु सुबिधाकालागि ती नगरमा रात्री बस सेवा चलाऔं । डोमेस्टिक उडान रात्री गर्दा काठमाण्डौको ट्राफिक जाम आधा कम हुन्छ । यात्रुहरुको मुटुले पनि यसरी ठाउँ छोड्दैन ।